यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा ! यसरी भेट भएको रहेछ ओलीसंग – Samacharpati Samacharpatiयी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा ! यसरी भेट भएको रहेछ ओलीसंग – Samacharpati
समिक्षा संग्रौला नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी भाञ्जि हुन् । प्रधानमन्त्री ओली समिक्षा संग्रौलीकी आमाको काकाको छोरा हुन् । नाताले समिक्षाकी आमा मुना संग्रौलाको दाई पर्ने भएकाले ओली समिक्षाको मामा पर्छन् ।
समिक्षाका माइती तर्फको परिवार झापाको विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ७ को भुटानी सरणार्थी शिविर नजिकै बस्दै आएका छन् । ४ सन्तान रहेपनि समिक्षा एक्ली छोरी हुन् । समिक्षाको माइति तर्फको परिवार कृषी पेशामा संलग्न छ । झापामा उनिहरुको एक तले घर छ । समिक्षाले झापाको दुर्गा माध्यमिक विध्यालयबाट २०६० सालको एसएलसी परिक्षा दिएकी थिईन् ।
उनले मेची क्याम्पसबाट कक्षा १२ को परिक्षा दिएकी थिईन् । समिक्षाको पाल्पाका कमल ज्ञवालीसंग २०६४ सालमा विवहा भएको हो । नेपाली सेनामा कार्यरत कमल काजको क्रममा झापामा रहदा उनिहरु बिच प्रेम सम्बन्ध थियो । बिवहा पछि समिक्षाको परिवार काठमाण्डौ बस्दै आएको छ । छोरा ११ वर्षका छन् भने छोरी ६ वर्ष की छीन् । समिक्षाले विगत ५ वर्षदेखि काठ्माण्डौको सितापाईलामा ब्युटिपार्लर संचालन गर्दै आएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र समिक्षाको परिवार बिच बेलाबेलामा फोन सम्वाद भेटघाट हुने गरेको बुझिन्छ । समिक्षाको सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त विवरण अनुसार २०७० सालमा उनिहरुको भेट भएको थियो । समिक्षा र उनका श्रीमान कमलले ओलीको हातबाट दशैँको टिका समेत ग्रहण गरेका थिए । उनिहरु बीच पारिवारिक भेटघाट समेत पटक पटक हुने गरेको थियो ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पटक मृगौला दान गर्ने अञ्जना घिमिरे र समिक्षा संग्रौला बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । नाताले मामा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसंग पनि समिक्षा र अञ्जना परिवारको आउजाउ हुने गरेको थियो । यहि बिचमा नाताले मामा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा असोजदेखि समस्या देखियो ।
सिंगापुरमा पुगेर प्लामफेराईसिस गरेर स्वदेश फर्केको केहि समयमा नै प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाले पुर्ण काम गर्न छाड्यो, मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि दशैँ अघि देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दान गर्ने व्यक्तिको खोजी भईरहेको थियो । विभिन्न व्यक्तिको परिक्षण गर्ने क्रममा समिक्षाको मृगौला प्रधानमन्त्रीलाई दान दिन उपयुक्त देखियो । समिक्षा संगै उनकी आमा मुनाको पनि मृगौलाको परिक्षण गरिएको थियो । तर उनको मृगौला ओलीलाई नमिल्ने भएपछि, समिक्षा मृगौला दिन तयार भएकी हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफन्तहरुलाई फागुन ११ गते आफ्नो जन्म दिनको अवसरमा समिक्षाको परिचय गराएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दान समिक्षाका आमा बुवा अहिले झापामा छन् । अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएपनि परिवारका सदस्यले औपचारीक रुपमा खुलेर बोल्न भने चाहेनन् । समिक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दान गरेकोमा आफुहरुलाई खुसी लागेको परिवारजनले बताएका छन् । समिक्षा प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबाट नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी थिईन् । उनको दाहिने तर्फको मृगौला झिकेर बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यारोपण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पहिलो पटक भारतको एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा नै मृगौला प्रत्यारोपण गराएपछि अहिले ओलीको सबैतिर प्रशंसा भएको छ । ओलीको यस निणर्यले नेपालका अस्पतालहरु प्रति विश्वास बढाएको छ ।